XOG Dowlada DF Oo Go an Ka Qadaneso Hadaladii Axmed Madobe & Gaas… | allsaaxo online
XOG Dowlada DF Oo Go an Ka Qadaneso Hadaladii Axmed Madobe & Gaas…
Published on May 11, 2018 by mahad hassan · No Comments
Maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ah, labadda dowlad goboleed ee ugu qadiimisan kuwa hadda dalka ka jira, ayaa waxay umuuqdaa kuwa dowlada Federaalka kula loolamaya siyaasadda arrimaa dibadda.
Axmed Maxamed Islaam [Axmed Madoobe], Madaxweynaha Jubbaland oo warbaahinta la hadlay dhowaan wuxuu tilmaamay in maamulkiisa uusan ku waafaqsaneen dowladda dhexe go’aanka dhax-dhaxaadnimada oo ah ka qaadatay xiisada Khaliijka.
“Dariiqa ay dowladu umartay xiisada Khaliijka waxay tahay mid aan sax ahayn, mana ka ah dhax-dhaxaadna, waxayna la safatay Qadar. Sidaas darteeda Jubbaland waxay taageersan tahay Imaaraadka, sababtoo ah iyagaa nooga waxtar fiican Qadar,” ayuu yiri Madoobe.
Cabdiwali Maxamed Cali [Gaas] oo dhankiisa marar kala duwan la hadlay wariyaasha wuxuu ku nuux-nuux saday in maamulkiisa uusan ka maar-min Imaaraadka, maadaama dhaqaalo iyo farsamo ahaan ay ka helaan taageero.
“Dowladda Federaalka waan kala hadleynaa mowqifka ay ka qaadatay xiisadda Khaliijka, sababtoo ah, waxaan aragnaa in Imaaraadka dal nooga fiican aanan hada heli Karin, sidaas darteeda waan ku qacin doonaa DFS inay taageerto,” ayuu yiri.
Isagoo shir Jaraa’id ku qabtay Magaalada Abu Dubai ee dalka Imaraadka ayaa wuxuu yiri mar kale: “Muqdisho kaliya ma ahan Soomaaliya, Soomaaliya ma ahan Muqdisho oo kaliya, sidaas darteeda Puntland, Imaaraadka ayey garab taagan tahay.
Dadka ka faalooda siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay ku tilmaameen haladaan dhiilaysan ee kasoo yeeray labadaan masuul kuwa ay ka dambeyso maskax wayn, islamarkaana ay muujiyeen inay ka maarmaan dowladda Dhexe.
Khabiiradda siyaasadda arrimaha dibadda ka faalooda ayaa waxay kula taliyeen dowladda Federaalka inay uyeerto labadaan Madaxweyne, si ay ogaadaan waxa ay aaminsan yihiin, kadibna ay usoo bandhigaan Shacbiga Soomaaliyeed.
Laakiin, hadii aysan sidaas sameyn madaxda dowladda waxay ka digeen in xaalada ay halkaan kasoo fogaan karto, islamarkaana labadaan Madaxweyne ay saameyn ku yeelan karaan Maamul goboleedyadda kale ee dalka ka jira